Ady amin’ny dahalo :: Voasambotry nandritra ny lanonam-panambadiany ny lehilahy iray • AoRaha
Ady amin’ny dahalo Voasambotry nandritra ny lanonam-panambadiany ny lehilahy iray
Ela ny ela ka voasambotra tamin’ny fotoana tsy nampoiziny ny lehilahy iray voalaza fa dahalo raindahiny mampiaiky ireo mponina tany Amboasary Atsimo. Nanatona ireo miaramilan’ny Tafika mpampandry tany ireo mponina nilaza fa io miatrika ny lanonam-panambadiany io ilay lehiben’ny dahalo karohina hatramin’ny ela antsoina hoe Dakosy.
“Nahazoana vokatra tsara ny ezaka nataon’ireo miaramila sy ny fanampian’ny fokonolona amin’ny fiaraha-miasa tany Amboasary Atsimo, afak’omaly. Voasambotra teo am-panaovana mariazy ny lehiben’ny dahalo malaza sy raindahiny. Ireo fokonolona no nahalala azy, na dia efa notenenina tamin’ireo mpitandro filaminana aza ny anaran’io dahalo isan’ny karohina io”, hoy ny fampitam-baovao avy amin’ny Tafika malagasy.
Fantatra ihany koa fa nanonona anaran’olona roa ity voatondro ho lehiben’ny dahalo nandritra ny famotorana azy. “Nanampy tamin’ny fisamborana ireo olona ireo ny fokonolona”, hoy hatrany ny loharanom-baovao. Voalaza fa efa namono olona maro nandritra ny fanafihana mitam-basy i Dakosy, araka ny filazan’ny avy amin’ny mpanao famotorana.
Nanaiky ny hanome ny basy tany aminy i Dakosy, taorian’ny fisamborana azy. Efa eo am-pelantanan’ny zandarimaria any Marotsipohy io basy io. Ankoatra ireo olona telo dia mbola misy olon-kafa naman’izy ireo no karohina hatramin’ny omaly. Malaza ao anatin’ny distrikan’Amboasary Atsimo ity dahalo raindahiny ity. Manantena ireo mponina any an-toerana taorian’izao fahatrarana azy izao fa hizaka ny vokatry ny nataony izy any am-ponja fa tsy handalo fotsiny ihany.
Fanalam-baraka Lehilahy nogadraina noho ny fanaparitahana sary mamoafady
Fanenjehana mpitandro filaminana Zandary voarohirohy amin’ny halatra lavanila
Fandrobana Mirongatra ny vaky trano any Iharana
Fitaovam-piadiana :: Sakaosy feno basy sy bala tavela teo afovoan-dalana